गर्भावस्थामा आवश्यक १० पोषकतत्व – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर १३ गते १८:२४
गर्भावस्थामा पोषण : कस्ता महिलाले कुन चिज कति खाने ?
गर्भावस्थामा उमालेको पानी पिउँ, नत्र बच्चालाई जोखिम हुनसक्छ!
गर्भावस्थामा रुघाखोकी र चिसोको उपचार कसरी गर्ने ?
अधिकांश महिलालाई गर्भवती अवस्थामा कस्तो खाना खाने भन्ने दुविधा हुने गर्छ । किनकि, यस्तो अवस्थामा दुई व्यक्तिका लागि पोषकतत्व पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा गर्भावस्थामै पूर्ण रूपमा पौष्टिकतत्व प्राप्त गरेको बच्चा स्वस्थ जन्मन्छ र जन्मपछि पनि स्वस्थ रहन्छ । गर्भावस्थामा चाहिने पोषणतत्व सजिलै प्राप्त गर्न सकिने केही खाना–
Tags: गर्भावस्था, पोषकतत्व